शैलिका छेत्री - कान्तिपुर समाचार
शैलिका छेत्रीका लेखहरु :
सर पिन्टोको केश सफारी
अरस्तु भन्छन्, ‘जीवनयात्राका निम्ति शिक्षा सबैभन्दा राम्रो प्रावधान हो ।’ हुन पनि शिक्षालाई ‘भविष्यको पासपोर्ट’ मान्न सकिन्छ । कारण विद्यार्थीको आउँदो भविष्यको तयारी यस्तै स्कुल वा कलेज शिक्षाबाटै हुनेगर्छ । त्यसैले भन्न मन लाग्छ– शिक्षालय विद्यार्थीका निम्ति ज्ञानको फोहरा हो, जहाँ विद्यार्थी ज्ञान पिउन भेला हुन्छन् ।
शक्ति जीवनदायी : प्रेम प्रकाशवान
आश्विन २३, २०७८
देवी सूक्त परिचयदेवीभक्ति प्रेमबारे मैले बाबा शरद् छेत्रीबाट बुझ्न पाएँ । प्रत्येक शारदीय नवरात्रमा बाबा मालश्री गाउनुहुन्थ्यो । घरको वातावरणमा बाबाको स्वरमा मालश्री गुन्जिँदा लाग्थ्यो– दसैं छेउमै आइसकेको छ । बाबा शक्तिको पुजारी हुनुहुन्थ्यो । हिन्दु दर्शन र धर्मशास्त्रमा शक्तिलाई ईश्वरको सक्रिय आयामका रूपमा बुझिएको छ । ‘शक्ति’ शब्दलाई संस्कृतको ‘शक’, ‘शक्ति’ या ‘उत्पादक क्षमता’ भनेर बुझिन्छ । मौलिक ब्रह्माण्डको ऊर्जा शक्ति हो, जसले सृष्टि र अस्तित्वलाई एउटै रेखामा राखेर हेर्ने गर्छ । बाबाका निम्ति देवी–शक्ति केवल सृजना, तर समस्त परिवर्तनको प्रतिनिधि थियो ।
'मलाई त्यसले छोएको मन पर्दैन'
भाद्र १९, २०७८
ऐलट्रइज्म पीडामा स्त्रीमानव सभ्यतामा पुरुष जातिलाई पौरुष्य सभ्यताको सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधिका रूपमा स्थापित गरिएको छ । स्त्रीमाथि भइआएको उत्पीडनले समाजको रोगी मानसिकतातर्फ संकेत गर्छ । कामसूत्र भन्छ, ‘अभ्यस्त इन्द्रिय सुख, जस्तै कामुक इच्छाले पनि दुःखलाई निम्त्याउँछ ।’ जुन समाजमा जागरुकताको कमी हुन्छ, त्यहीँ नै यौन आनन्दको नाममा लुटिएको हुन्छ मानव अस्मिता । तर, के यौन यति बढी स्पेस पाउने विषय हो र ? बायोलोजिकल दृष्टिले हेर्ने हो भने यौन केवल प्रकृतिमा होमो सेपियन्स अर्थात् हामी मानव जातिको जनसङ्ख्यालाई कायम राख्ने अति साधारण प्रक्रिया मात्रै हो ।
चक्रव्यूहबाट फर्किएका शरद छेत्री
श्रावण २३, २०७८
सपना र गर्भपतनजबजब दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन हुन्छ, म बाबालाई सम्झिन्छु । उन्मुक्तिको सपना कसले पो देख्दैन र ? तर, सन् १९८० देखि २०२१ सम्मै त्यो सपना सपना मात्रै बन्यो । मेरो बाबाको पनि एउटा सपना थियो– छुट्टै राज्य भयो भने कम से कम सरकारले मान्यता दिइसकेको नेपाली भाषामा लेखिने साहित्य केन्द्रमा त पुग्थ्यो ।
नर्स: महामारीमा पनि अग्रपंक्तिमा
ज्वाला ढकाल माघ १५, २०७८
आज नर्सिङ दिवस । नर्सिङलाई कला र विज्ञान दुवैको रुपमा वर्णन गर्न सकिन्छ । यसको हृदयमा मानव प्रतिष्ठाको लागि आधारभूत सम्मान र बिरामीहरूको आवश्यकताहरु थाहा...
पूर्ण खोप प्राप्त १,४०,१५,३१४
अपडेटः शनिबार, १५ माघ, २०७८ । १७ : ०६ बजे